Instagram waxay bilaabaysaa inay hirgeliso xisaab fara badan oo ku saabsan iOS | Wararka IPhone
Bishii Nofeembar ee la soo dhaafay, shabakadda bulshada ee 'Instagram' waxay billowday tijaabooyin taxane ah oo ku saabsan Android si loogu oggolaado dadka isticmaala inay adeegsadaan koontooyin kala duwan iyadoon loo baahnayn inay si joogto ah u xirmaan oo ay galaan. Tani waxay ahayd mid ka mid ah dalabyada ugu badan ee ay codsadeen bulshada isticmaaleyaashu sannadihii la soo dhaafay iyo wixii ka dambeeyay Instagram waxay qaadataa waqti aad u dheer in la hirgaliyo.
In kasta oo dadka isticmaala Android ay horeyba ugu raaxeysan karaan suurtagalnimada, dadka isticmaala macruufka ayaan helin wax war ah oo ku saabsan, illaa toddobaadkan. Dhowr maalmood ka hor, Instagram ayaa cusbooneysiin yar ka sameysay App Store, laakiin noocyadan cusub qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa bilaabay inay arkaan ikhtiyaar ah ogolaanaya in la beddelo koontada adigoon ka bixin oo aad gasho username iyo password. Si loo ogaado haddii Instagram ay kugu dartay tijaabadan, kuwan waa tallaabooyinka ay tahay inaad raacdo:
Tag boggaaga oo guji astaanta astaamaha, oo ku taal geeska kore ee midig ee barnaamijka. U gudub dhanka hoose ee menu oo arag haddii «Ku dar koonto«. Hadday sidaas tahay, geli faahfaahinta koontadaas waxaadna awood u yeelan doontaa inaad si fudud oo dhaqso isugu beddelato astaamaha kala duwan. Si tan loo sameeyo, mar kasta oo aad rabto inaad ka booddo hal muuqaal oo kale, si fudud u riix astaanta goobaha. Mar kasta oo aad hesho ogeysiis, Instagram ayaa ku tusi doonta koontada ogeysiiskaasi ka imanayo.
Xilligan la joogo ma ogin goorta shaqadan ay habka rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Instagram waxay bilaabaysaa inay hirgeliso xisaab fara badan oo ku saabsan IOS